मलाई लाग्छ, बर्दिवासका मुसहरले हाँस्न र खुसी हुन टीभी हेर्नु परेन। आफ्नो बस्तीमा पोतिएको खुसीको रङ् देखर हाँस्न थालेका छन्, अहिले ती। खुसीको रङ् कस्तो हुन्छ? कठीन छ उत्तर दिन। उत्तर खोज्न बर्दिवासको मुसहर वस्ती नै जानुपर्छ । जहाँ पोतिदै छ, त्यो रङ्।
आज जनताले जनताको घर बनाउनु परेको छ । कति तिक्त छ, सत्य ? देश–विदेशका नेपालीका जनजनका मनमनमा बसेका छौ, सहयोग पाएका छौ। मनमुठी खोलेर नेपालीले सहयोग गरे । किन चाहियो प्रचार ? आत्मरतिपूर्ण प्रचार आफैंमा आत्मघाती हुन्छ ।
मेरो अनुरोध, नेताभन्दा पनि त्यही मुसहर टोलकी एउटी मुसहरी आमालाई वस्तीको साँचो दियौ भयो भने सहयोगीप्रति साँचो सम्मान हुनेछ । राष्ट्रको ढुकुटीबाट फाल्टु खर्च हुने छैन । म मात्र हैन, देश–विदेशका सम्पूर्ण सहयोगीको चाहना यही हुन सक्छ । हैन र फेरि पनि गन्धेनेता बोलायौ भने मेरो मनको फुलबारीमा फुलेको एउटा फूलको बोट उखेलिन सक्छ । मजस्ता लाखौंको मनबाट त्यो फूलको बोट उखेलिन सक्छ ।
आइतबार, चैत्र १३, २०७३ १३:५४:३९